Ford wuxuu saxeexay Doug Field, madaxweyne ku xigeenka mashruuca Apple Car | Waxaan ka imid mac
Warka la xiriira Baabuurka Apple, wuxuu ku urursan yahay waqtiga. Sidoo kale ma haysanno wax war ah toddobaadyo ama xitaa bilo, marka loo eego isla toddobaadkan waxaan ka helnaa dhowr war mashruuca Apple inaad samaysato baabuur koronto kuu gaar ah halkii aad ka abuuri lahayd nidaam waditaan oo madaxbannaan (inkasta oo aannaan meesha ka saari karin).
Shalay waxaan kugu wargalinay imaanshaha laba injineer oo Mercedes ah mashruuca Titan ee Apple. Maanta waxaan ka hadleynaa dib -u -dhac weyn oo ku yimid mashruucan, maadaama, sida laga soo xigtay Bloomberg, Doug Field, oo Apple kaga soo biiray Tesla, uu u saxiixay shirkadda Mareykanka ee Ford. Duurka Doug u adeegay madaxweyne ku -xigeenka kooxda mashaariicda gaarka ah ee Apple.
Duurka Doug wuxuu ka shaqeeyay Tesla 2013 oo isagu wuxuu mas'uul ka ahaa wax soo saarka Model 3 ka hor inta Elon Musk uusan qaadan mas'uuliyaddaas.
Sannadkii 2018, xirfadiisu waxay u rogtay 180 digrii iyo ka degay Apple oo ah agaasimaha mashruuca Titan, mashruuc gadaashiisa laga helay baabuurka Apple sida ku cad daabacaad sanadkii hore kaas oo sidoo kale lagu sheegay inay haystaan ​​koox boqolaal injineero ah oo ka hoos shaqeeya John giannandrea.
Dhaqdhaqaaqa in waxay noqon kartaa dharbaaxo adag Ujeeddooyinka muddada-gaaban ee Apple iyo gaarigiisa, Doug Field wuxuu dib ugu biirayaa Ford, halkaas oo uu ka bilaabay xirfadiisa 1987.
Bishii Janaayo ee la soo dhaafay, isla daabacaaddan ayaa tilmaamtay taas waxaa jiray waxyaabo badan oo aan la garanayn oo la xiriira Baabuurka Apple iyo sida badeecada loo bilaabi karo 5 ama 7 sano kadib. Isla warbixintan ayaa lagu sheegay in baabuurku “meelna uga dhow yahay wax -soo -saarka” iyo in “waqtiyada kama dambaysta ah ay is -beddeli karaan.”
Wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira wejiga wax soo saarka ee Baabuurka Apple, hiigsiga sanadka 2024, xog ka timid dhexdhexaadinta DigiTimes oo markii dambe ay CBS xaqiijisay. Haddii bixitaanka Doug Field ay ka dhigan tahay isbeddel qorshayaasha wax soo saarka, waqtiga ayaa sheegi doona.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Ford wuxuu saxeexay Doug Field, madaxweyne ku xigeenka mashruuca Apple Car
Patent Apple: Muraayadda qalooca iyo shaashadda oo saldhig u ah iMac iyo MacBook